Ukwenza ibhiya kunye nekofu flavour-iindaba-Ningbo COFF oomatshini Co., ltd
Utywala bokuba neCrew Flavour
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 226
Kokokuqala ukuba ndenze ibhiya kunye nencasa yekofu, ibrewer yethu isifundise inyathelo ngenyathelo nazo zonke iinkcukacha, nangona iwort ngaphambi kokuvumba ingancedi nto, sonwabile ukubona into eza kwenziwa ligwele.
Ngapha koko akukho lula kum ukuba ndiyayiqonda yonke inkqubo yokugungxula, ukubetha, ukubilisa kunye ne-whirlpool. Zingaphi iimalts nekofu esiza kuzondla? Nini kwaye kutheni ukufudumeza? Ulawula njani ixesha elifanelekileyo?
Le mibuzo iphelele entlokweni yam. Ngoku siyayiqonda imisebenzi enzima yokulayisha ekufuneka yenziwe mihla le ngabapheki, kwaye sinoluvo lokudibanisa itanki lamanzi ashushu kunye ne-thermail yokufudumeza ioyile.
Ukufumana ezinye iiresiphi zokupheka ibhiya kunye nencasa eyahlukileyo, nceda ucofe apha ukunxibelelana nathi.
Previous: Ngaba ujonge iitanki zoPhuculo loBuchule kufutshane?
Okulandelayo: Shwankathela umphumo weNdlela ye-Coff yokufaka utywala kunye nekofu